Fursado Tabarucid - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Fursado Tabarucid - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Gadaal miyaad taagantahay bulshada caafimaadka qabta?
Haddii aad aaminsan tahay sinnaanta adoo adeegsanaya daryeel caafimaad oo soo dhaweynaya, xoojinaya, isla markaana ka caawinaya bulshada oo dhan inay kor u kacaan, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah! Waxaan haynaa fursado iskaa wax u qabso oo ballaadhan oo aad heli karto oo aad ku siin karto waqtigaaga iyo awoodaada, laga bilaabo kiliinikada ilaa maamulka. Fadlan wax yar qaado si aad u buuxiso codsi iskaa wax u qabso ah ~
Markii la dhammeeyo, fadlan u gudbi dalabkaaga oo dib u bilow (haddii ay ku habboon tahay) to connect@lanchc.org.
Qiyamkaaga shaqsiyeed miyay la jaan qaadayaan hadafkeena, himilooyinkeena, iyo nooca daryeelka? Ku soo biir kooxdayada!
samee a Deeq